Blog Blog ee Tagged "Safar iyo Meelo" - THE INDIAN FACE
Waxaan horeyba ugu faraxsanahay xilliga barafka! Iyo, markaan ka fikirno Colorado, waa sida saxda ah baraf waxa ugu horreeya ee maskaxdeenna ka gudba… Suurtagal maaha inaan midna midka kale ku biirin! Soo saar Muraayadaha indhaha oo wax badan ka baro saldhigyadeeda ay ka buuxaan buuraha oo leh waxyaalo la yaab leh iyo baaquli dabiici ah.
Mid ka mid ah meelaha ugu wanaagsan ee lagu tababaro dabaysha iyo kitesurf waa shaki la'aan Tarifa, ee gobolka Cádiz Maaha wax aan waxba ka jirin inay isaga u garanayaan sida caasimada dabaysha! Diyaar ma u tahay inaad naftaada u ogolaato inay ku qaado kan ugu fiican Andalusia? Haddii aad jeceshahay badda, dabaysha iyo xiisaha, ka dib akhri oo soo arag khibradda booqashada Tarifa, Meel ku habboon in lagu tababaro qaniinyada iyo dabaylaha!
Hadaadan booqan Hoi An kani waa wakhtigii aad samayn lahayd! UNa waa magaalo xeebeed astaan ​​u ah Vietnam oo loo aqoonsaday quruxdeeda, taariikhdeeda, dhaqankeeda iyo dhaqankeeda. Waxay ku taal kalabar u dhexeeya Ho Chi Minh iyo caasimadda Hanoi, Hoi An shaki la’aan waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu booqashada iyo quruxda badan dalka. Akhriso oo nala baro sababta loogu tixgelinayo mid ka mid ah khasnadaha ugu waaweyn ee Vietnam!
Yardham Yards The xaafada cusub ee gaarka ah ee New York!
Haddii aysan ahayn markii kuugu horreysay ee aad soo booqato New York waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad dib u laabato oo aad dib u eegto. Magaaladan weyn waxay hoy u tahay mid ka mid ah dhismooyinka hamiga leh sannadihii la soo dhaafay: Hudson Yards. Akhriso oo waxbadan ka ogow sida ay u egtahay xaafadda NYC uguna raaxada badan!
Khibradda kor u qaadista Volcano ee Villarrica
Feejignaan, dalxiisyaasha jecel dalxiiska! Waan ognahay inay jecel yihiin inay ogaadaan meelo cusub ayna ku noolaadaan waaya-aragnimo lama ilaawaan ah oo noloshooda gaarsiiya heer aad u daran. Markan waxaan ku wajahan nahay mid ka mid ah meelaha ugu booqashada badan dalxiisayaasha iyo dalxiisayaasha adduunka ka socda: Fulkaanaha Villarrica! Soo ogow waayo-aragnimada kor u qaadista fulkaanaha firfircoon ee ugu caansan Chile.
Tani waxay cirka isku shareertay Sydney-Wollongong (Australia)
Mid ka mid ah meelaha ugu wanaagsan ee lagu soo bandhigo balooggu waa shaki la'aan Australia. Soo hel khibradda Ku dhaqaaq cirifka magaalada Sydney - Wollongong!
Khibrad jannada ku taal Xeebta Turquoise
Haddii aad jeceshahay sahaminta, xeebaha paradisiacal iyo firaaqooyinka saxda ah, macluumaadkan adiga ayaa loogu talagalay adiga. Baro yaabka yaabka leh ee Xeebta Turquoise ee ku taal Riviera-ga Turkiga!
Ka duulaya buufin ku yaal jasiiradda Mallorca
Duulista Mallorca ee kubbadda hawada kulul waxaa caadiyan caado ka noqotay jasiiradda Isbaanishka ee Balearic. Khibrad dhan oo kumanyaal halyeeyga u qaadata inay dhadhamiyaan cirka jannada ku duulaya ee dunidan weyn.
Langkawi Archipelago ee Malaysiya
Laga soo bilaabo masaafada u dhaxaysa Badda Andaman waxaan aragnaa mid ka mid ah xasuuqii ugu xumaa ee dunida oo dhan quruxdiisa qurxoon: Langkawi, jasiirado la yaab leh oo ka kooban 104 jasiiradood.
Surf ee Nazaré, oo ah caasimada hirarka ugu waaweyn adduunka.
Magaalo xeebeedka ah oo la sheegay inay deggan tahay oo deggan laakiin taa dabiici ahaan u leh bad weyn oo u muuqata inay si gaar ah loogu talagalay dusha sare.
Sahaminta Helsinki: Dalxiiska, dhaqanka iyo nasashada Finland!
Magaaladan qurxinta leh ee ku taal xeebta Baltic waxaa lagu qeexay inay tahay degganaan iyo aqoon buuxda iyo aqoon. Bartamaha iyo dhammaan geesaha Helsinki waxay dhiirigeliyaan taariikhda, hodanka dhismayaasha iyo naqshadaha, taasoo dalxiis kasta u soo jiidata
Dooxada Elqui: Safarka aad ku tagtid Chile oo aadan seegi karin!
Waxay ku yaalliin gobolka Coquimbo, galbeedka La Serena, waxaan helnaa dooxada Elqui, oo ka mid ah meelaha dabiiciga ah ee ugu quruxda badan uguna quruxda badan waddanka oo dhan, iyo Koonfurta Ameerika.
Guusha fuushan - laga soo bilaabo waaya-aragnimada iyo sumcadda - aad bay u ogtahay tan… fuulitaanka Yosemite waa wax la yaab leh! Ma goobta Waxaa loo tixgaliyaa inay tahay mekad ubaxyahannada ugu wanaagsan adduunka, waana caqabado la yaab leh in badan inay go'aansadaan inay darbiyada beerta qaran ee Californian ka dhigaan rikoodhkooda.
Duulimaadka Pokhara: duulaya bartamaha Nepal
Haddii aad ka fekereyso inaad ku baaluqid, Pokhara waa mid ka mid ah meelaha ugu wanaagsan ee la sameyn karo. Magaaladan, oo sidoo kale loo yaqaan "albaabka Annapurnas" (waddo caan ah oo loo maro Himalayas), ayaa laga helaa xeebta harada Lake Phewa oo ku taal badhtamaha Nepal, oo ah halka u dhow dhow Sarangkot iyo dhirirka la xiriira harada ka dhig aag kufiican oo lagu safro.
Socdaal ku tag Brisbane ee Australia
Guul Australia oo dhan oo aadan seegi karin! Haddii aadan wali booqan caasimada gobolka Queensland ee Australia, waqtigaani waa waqtigii ugu fiicnaa oo lagu dari lahaa liiska safaradaaga soo socda. Waxay ku taalaa dhinaca xeebta waqooyi-bari, 920 kiiloomitir magaalada Sydney waxaan ka helnaa Brisbane
Angkor Wat iyo macbudyadii lumay ee Kamboodiya
Angkor Wat iyo macbudyadii lumay ee Kamboodiya: Soo hel dhismooyinka cajiibka ah ee Hindida ee Khmer Empire. Waxaa laga yaabaa inaad xusuusato macbudyadii u adeegi jiray sidii filimka 'Lara Croft: Tomb Raider' ama 'In the mood for love'
Meelaha ugu cajiibka badan ee lagu isticmaalo dhamaadka sanadkan
En The Indian Face Waxaan nahay sahamiyayaal, sidaa daraadeed waxaan had iyo jeer u maleynaa in maalin walba ay tahay fursad lagu soo helo meelo cajiib ah, sidaa darteed waxaan rabnaa inaan ku tusno meelaha ugu yaabka badan galaan 2018 ku noolaanshaha khibrad.
Patagonia by baaskiil: safar cajiib ah
Dabaylo duufaano ah, qorrax soo-dhac ah iyo dhul-gariir iyo aan kala-go 'lahayn ayaa safar baaskiil waddo ah ku maraya Patagonia oo ah safar adag oo adag. In kasta oo ay jiraan wax kasta, muuqaalka muuqaalka iyo dareenka ee laga dhex arki karo oo laga garan karo halkaas ayaa ka dhigaya in daqiiqadahan qadhaadh in ay noqdaan macaan.
Skate in Lanzarote: jasiirad u gudub barafka
Lanzarote waa jasiirad caan ku ah kartideeda ku-dhaqanka Xeebaha. Laakiin sidoo kale waa goob aad ku soo deyn karto xeeladahaaga skateboard-ka iyo hal-abuurka. Waxana ay tahay in maanta aan idiin soo qaadano muuqaal video ah oo aan ku tusayno waxa aad ku raaxeysan karto
Degaan aad uxun: Holmenkollen baraf boodbood
Airbnb wuxuu la yaabay qof kasta oo leh guri aad uxun oo laqiyaasay: halyeeyga Holmenkollen ski booday. Xarumahan ayaa loo adeegsaday sidii boodhka barafka ah ee Ciyaaraha Olombikada 1952 ee Oslo.